ဗုံးပေါက်မှာကြောက်တာကြောင့် ပရိသတ်အ၀င်နည်းသွားတဲ့ နန်းစုရတီစိုးရဲ့life style & IT ၂၀၁၀ ပြပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဗုံးပေါက်မှာကြောက်တာကြောင့် ပရိသတ်အ၀င်နည်းသွားတဲ့ နန်းစုရတီစိုးရဲ့life style & IT ၂၀၁၀ ပြပွဲ
ဗုံးပေါက်မှာကြောက်တာကြောင့် ပရိသတ်အ၀င်နည်းသွားတဲ့ နန်းစုရတီစိုးရဲ့life style & IT ၂၀၁၀ ပြပွဲ
Posted by chitkay on Apr 30, 2010 in Myanma News | 12 comments
life style & IT 2010 ကုန်စည်ပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ တပ်မတော်ခန်းမတွင် 28.4.2010 နေ. ကတည်းက စတင်ကျင်းပနေသော်လည်း ကုန်စည်ပြပွဲ ဖွင့်ပွဲနေ့တွင် လာရောက်ကြည့်ရှုသူ အနည်းငယ်သာ ရှိခဲ့ပြီး ယခုနှစ်အတွင်း ကျင်းပခဲ့သည့် ကုန်စည်ပြပွဲများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပရိသတ် အဆမတန် ကျဆင်းသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ပြပွဲတွင် အိုင်တီပြခန်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ ပရိဘောဂ၊ အဝတ်အထည်၊ အစားအသောက်နှင့် အခြား လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများကို ကုမ္ပဏီပေါင်း ၅ဝ ကျော်က ပြခန်း ၁ဝဝ ကျော် ပြသရောင်းချခဲ့သည်။
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်ဆွေနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းစစ်တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်ဝင်းမြင့် တို့ တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သော Lifestyle & IT 2010 အမည်ရှိ ၄ ရက်ကြာ ကျင်းပမည့် ပြပွဲဖွင့်ပွဲရက်ဖြစ်သည့် ယမန်နေ့က ပရိသတ် တသောင်းခန့်သာ လာရောက်ခဲ့သည်။ ယခင်ပွဲများတွင် တရက်လျှင် ပရိသတ် အနည်းဆုံး ၅ သောင်း လာရောက်ခဲ့ကြသည်။
Lifestyle & IT 2010 ပြပွဲသို့ လာရောက်သူအများစုမှာ မော်ဒယ်များ၊ အကအဖွဲ့များဖြင့် တင်ဆက်သည့်ဖျော်ဖြေရေးတပိုင်းကုန်စည်ကြော်ငြာအစီအစဉ်များကိုသာစိတ်ဝင်စားကြသည်။လာရောက်ကြည့်ရှုသူ နည်းပါးခြင်းကြောင့် တွက်ချေမကိုက်ကြောင်း ကုမ္ပဏီအားလုံးလိုလိုက ပြောဆိုသည်။
“ဗုံးကိစ္စကြောင့် လူစုလူဝေးရှိတဲ့ နေရာတွေကို လူတွေမလာကြတာလို့ ထင်တာပဲ။ နောက်တခုက ရာသီဥတု အရမ်းပူနေတာကြောင့် လူတွေ အပြင်မထွက်ကြတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်” ဟု နာမည်ရ ကွန်ပြူတာပစ္စည်း ကိုယ်စားလှယ် ကုမ္ပဏီကြီးတခုက ဆိုသည်။
ပြပွဲပထမနေ့တွင် ဒီဗီဒီ၊ တီဗီ စသော အီလက်ထရွန်းနစ် ပစ္စည်းများနှင့် အလှကုန်၊ အိမ်သုံးကုန် တန်ဖိုးနည်း ပစ္စည်းများ အနည်းငယ်သာ ရောင်းချခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ကွန်ပျုတာပညာရှင်များမှ ကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ IT ပွဲတုန်းကထက်စာရင် တော်တော်ကြီးနည်းသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလို လူဝင်နည်းခြင်း၊ အရောင်းအ၀ယ်ပါးခြင်း တွေက ဗုံးပေါက်ကွဲတာနှင့်ပဲ ပတ်သက်လေမလား၊ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေနှင့်ပဲ ပတ်သက်လေမလား ဆိုတာကတော့ စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကပဲ ဆုံးဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အဆိုပါရလဒ်များကြောင့် နောက်ပြုလုပ်မည့် IT ကုန်စည်ပြပွဲများတွင် ပြပွဲသို့ ၀င်ရောက်မည့် ကုမ္ပဏီများနည်းသွားနိုင်မလား၊ ပြပွဲလာသူတွေနည်းသွားမလားဆိုတာကတော့ နောက်ပွဲရလဒ်ကိုပဲ စောင့်ကြည့်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အေးဗျာ ….. ဗုံးကွဲပြီးကတည်းက ရန်ကုန်က လူတွေ တော်တော်လန့်ကျတယ် ..မိဘတွေကလည်းစိတ်မချကျတော.ဘူးလေ..
ကန်တော်ကြီးမျှော်စင်ကျွန်းထဲက ဆိုင်တွေဆို မရောင်းရလို့ ညည်းကြတယ်
ဘယ်သူမှအကျိုးမရှိတဲ့ လုပ်ရပ်ကိုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ နေရာတိုင်းမှာထိပ်လန့်နေကြပါတယ် မန္တလေးမှလည်းဒီလိုပါပဲ လူစည်ကားရာနေရာတွေမှာလူမရှိတောပါဘူး
လူစည်ကားတဲ့ နေရာတွေမသွားတာကောင်းပါတယ် တော်ကြာ ကိုယ်နဲ့ ကျမှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တွေဖြစ်ကုန်ရင်ခက်၇ချည်ရဲ့ 
လူစည်ကားတဲ့ နေရာ တွေ မသွားတာကောင်းတယ် ဆိုတော့ လူမစည်းကားတဲ့ နေရာတွေကော သွားချင်ကြတယ်ပေါ့ နော်.
အင်း လူမများတဲ့နေရာတွေ သွား၇င် ကောင်းတယ် မလားဟင်…သားသွားလိုက်ဦးမယ်… အော်အစ်ကိုတို့လိုက်ဦးမလား..
အခုဆိုရင် မန်းတလေးဂေဇက်မှာလဲ ပွဲဆူအောင် လုပ်ဖို့ ၊ ဘယ်က အကောင့်သစ်တွေမှန်း မသိဘူး ၊ စည်ကားနေပြီ ဗျို့ 
ဗုံးကို it ထက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလို့မလာတာနေမှာပေါ့ဗျာနော
သယ်ရင်း ထပ်ထည့်ပေးလိုက်တယ် ….